Sidee si habboon u isticmaali kartaa aaladaha suuq-geynta Amazon?
Gaaban gaaban ayaa loogu talagalay qalabka suuq-geynta Amazon oo ah AMS. Waa lagama maarmaan in laga wada hadlo mawduucan sababtoo ah "tartanka tartanka" ayaa ah ganacsatada ugu internetka ah ee ku yaalla Amazon maalmahan.
Amazon Marketing Services (AMS) waxay bixisaa adeegayaal online ah oo leh faa'iidooyin badan oo iyaga siinaya fursad ay kaga soo baxaan tartamahooda iyo inay sarreeyaan badeecadooda sareeya bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon.
Shirkad kasta oo khibrad leh Amazon waxay ogtahay in mid kasta oo gujinaya liiskaaga ay macnaheedu noqon karto iibsi - gremax capturar cf 1988. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la fahmo sida loo isticmaalo qalabka suuq-geynta Amazon si faa'iido badan looga helo.
Maxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qalabka suuq-geynta amazon?
Sida aan u sheegey ka hor Amazon waa suuqa aadka ujeeda tartanka halkaas oo inta badan tartamayaashu ay yihiin hal guji, oo dhammaantoodba waxay bixiyaan faa'iidooyin isku mid ah waxayna leeyihiin dhibco laxaad leh. Si kale loo dhigo waxaad ku socotaa qoorta iyo qoorta oo aad la wadaagto suuqyadeena suuqyada waxayna leeyihiin fursado isku mid ah si aad ugu guuleysato sanduuqa iibka ee Amazon. Macaamiisha suurtogalka ah ayaa riixi kara boggaaga tartanka, waxaadna lumineysaa iib ah hal daqiiqo. Taasi waa sababta aad u leedahay ilaa 10 ilbiriqsi si aad uga dhaadhiciso raadiyaha si aad u dooratid sida saxda ah ee alaabtaada.
Adeegga Suuq-geynta Amazon ayaa kaa caawin doona inaad soo jiidato macaamiishooyin badan oo suurtagal ah oo kordhiya aragtidaada astaanta ah ee Amazon. Waxaa intaa dheer, waxay u oggolaaneysaa in lagu beegsado xayeysiisyo dadka isticmaala marxalado kala duwan oo iib ah. Waxay ku siinaysaa karti aad ku heli karto calaamaddaada hore ee dukaamada cusub ee suuqa ku yaal Amazon.
Xayeysiisyada madaxbannaan waxay door ka qaataan doorka sheyga, alaabta la soo bandhigay ee ujeedooyinka isticmaala kuwaas oo xiiseynaya badeecad gaar ah. Waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa muujinaya xayeysiisyada waxay kaa caawinayaan inaad macaamiishaada ka dhigi kartid degaankaaga Amazon.
Amazon Marketing Services ayaa udub dhexaad u ah saddex nooc oo waaweyn oo Amazon ah:
Dhamaan qaababkan xayaysiisku waxay leeyihiin meel ay ku jiraan funaanadda Amazon. Istaraatijiyad istiraatiijiyadeed oo lagu guuleysto wuxuu u baahan yahay dhammaan saddexdan shaqadood iyo waliba noocyada beegsashada kala duwan ee ololaha.
Xayeysiisyada raadinta madaxa
Xayeysiisyada raadinta madaxada waxay ku saleysan yihiin dusha sare ee iibka iibka. dadka isticmaala waxay fiiriyaan bogga natiijooyinka raadinta waxayna si toos ah u saameynayaan raadiyaha iibsashada go'aanka.waxay ugu fiican yihiin raadinta calaamadda iyo guud ahaan qaybaha guud.
Fikradda faa'iido muhiim ah ee cinwaanka raadinta adhigu waa u qalantaa waa awoodda loo leeyahay in loo diro farriimaha wax aan ka ahayn qodobbada faahfaahinta alaabta Waxaad heleysaa fursad aad kuugu soo dirto boggaga sida URL-ga, bogga calaamadda, bogga natiijooyinka raadinta iyo badeecooyinka bogga.
Xayaysiinta badeecadaha ee taageerada
Xayeysiinta badeecadda waxay noqon kartaa laba nooc - si toos ah iyo buug-gacmeedka teendhada la kiciyay, halka kan labaadna uu yahay ereyo muhiim ah. Xayeysiisyada waxaa lagu dhejiyaa TOP ama hoose ee bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon markaad isticmaasho mashiinka iyo bogga faahfaahsan ee sheyga markaad isticmaasho qalabka gacanta. Xayaysiinta wax soo saarka waxaa loo tixgeliyaa xayeysiisyada dhexda dhexe ee soo galaya iyaga oo u muuqda kuwa hortaagan macaamiisha mustaqbalka marka ay isbarbardhigaan fursadaha kala duwan ee iibsashada.
Xayeysiisyadaasi ma helayaan oo keliya iibiyeyaasha laakiin sidoo kale dhamaanba iibiyeyaasha saddexaad ee Amazon. Si deg-deg ah ayaad u abuuri kartaa iyaga isla isla markaa isla markiiba waxay helayaan oggolaansho.
Xayaysiiskan xayeysiinta ah wuxuu la mid yahay dukaanka Google sida xayeysiisku u yahay alaab gaar ah. Intaa waxaa dheer, Amazon sidoo kale waxay tixgelineysaa tixgelinta alaabtaada si aad u weydiiso user, siyaasadda qiimaha, dib u eegista, iyo taariikhda iibka.
Ugu fiican ee waa inaad kala dooran kartaa noocyada bartilmaameedka tooska ah iyo gacanta lagu barto..Markaad si toos ah u isticmaashid adi, Amazon waxay isticmaashaa macluumaadka la heli karo si aad ula barbardhigto xayeysiinta alaabtaada leh shuruudaha raadinta ugu haboon. Xaalad kaddib markaad xayeysiis ku sameysid gacantaada, waxaad ku dari kartaa liiska shuruudaha raadinta kaas oo aad beegsan karto xayeysiinta alaabtaada. Ololaha talaabadu waxay leeyihiin kharash aad u sarreeya halkii guji, laakiin waxay siiyaan fursado bartilmaameedsan, halka ololayaal toos ah loo abuuri karo oo laga arki karo tiro badan oo baarayaasha ah.
Anigu ma codayn karo labada buug gacmeed ama xayeysiin badeecad toos ah. Waxay labaduba faa'iido u leeyihiin ganacsigaaga, markaa si xoog leh ayaan kugula talinayaa inaad u isticmaasho meel adag.
Ka mid ah shuruudaha asaasiga ah ee Amazon Sponsored Products, waxaan kala saari karaa kuwa soo socda:
An akoon firfircoon ee Amazon xirfadle;
Awood u leh in lagu wareejiyo dhammaan cinwaanada ku yaalla dhulka Mareykanka;
Liistada alaabtaada waa inay ku saleysnaato dhowr qaybood oo la heli karo;
Waa inaad iibsataa oo kaliya tafaariiqda cusub oo asal ah;
Xayeysiintaada waa in la abuuraa kaliya liiska ku yaala sanduuqa iibka. Haddii kale, xayeysiiskaaga lama soo bandhigi doono macaamiishaada iman kara Amazon.
Waa inaad talefonadaada ku iibsataa mid ka mid ah wadamada soo socda - US, UK, Canada, Jarmalka, Faransiiska, Spain, Talyaaniga, iyo Shiinaha.
Muujinta bandhigyada alaabta
Xayeysiinta tusmooyinka bandhigtu waxay ku saleysantahay hoosta jilitaanka iibka waxaana lagu muujiyay kaliya bogagga faahfaahsan ee sheyga. Waa fursadaada ugu dambaysa ee aad ku dhaadhiciso macaamiishaada iman kara inay iibsadaan.
Noocyada noocan oo kale ah ayaa lagu beegsan karaa nooca sheyga ee macaamiisha u socoto inuu iibsado ama uu doorbidayo horey ama horeyba. Beegsiga alaabtu wuxuu ku siinayaa fursad aad ku go'aamiso bogagga alaabta ee aad rabto in xayeysiiskaaga la dhigo. Tusaale ahaan, waxaad soo bandhigi kartaa alaabtaada boggaga tartanka suuqa, waxaad siisaa Amazon raadinta waxyaabaha alaabta ah ee qiimo macquul ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la yiraahdo in bartilmaameedku uu yahay mid xadidan madaama aad ubaahan tahay inaad dooratid waxyaabaha aad rabto xayeysiisyadaada inay muuqdaan.
Waqtigeeda, bartilmaameedka xiisaha wuxuu dabooli karaa dhulka intiisa badan laakiin leh wax yar oo ka yar. Isticmaalka nooca xayeysiinta ah waxaad tusi kartaa alaabtaada loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo u fiirsanaya qayb gaar ah oo badeecado ah ama alaabada la xidhiidha isla qaybtaas.